अनुभवबाट सिक्दै ओमिक्रोनको सामना- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ६, २०७८ ढुण्डीराज पौडेल
ओमिक्रोन यसरी नै फैलिइरहे केही हप्तामा उच्च विन्दुमा पुगी, स्थिर भई विगतमा जस्तै केही महिनामै लहर मत्थर हुँदै जान सक्छ । तर यस अवधिमा रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारको प्रबन्ध हुन नसके विगतमा झैं कैयौंको अकालमा मृत्यु हुन सक्छ । कोरोनाको पहिलो लहरमा दीर्घरोगी तथा वृद्धवृद्धाहरू बढी प्रभावित थिए । इटाली, स्पेनलगायत युरोपेली मुलुकहरूमा संक्रमित हुनेहरूमध्ये दस प्रतिशतसम्मको मृत्यु भएको थियो र ती बहुसंख्यक वृद्धवृद्धा थिए । स्वास्थ्य सेवाले प्राथमिकता पाएका त्यस्ता देशले पनि अकस्मात् पैदा भएको महामारी थेग्न सकेनन् ।
नेपालमा अन्य देशका तुलनामा ढिलै कोरोनाको पहिलो लहर प्रवेश गर्‍यो । यसबाट विशेष गरी वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीहरू बढी प्रभावित भए । यो मत्थर भएको केही महिनापछि दोस्रो लहर भारत हुँदै यहाँ प्रवेश गर्‍यो, जसले तुलनात्मक रुपमा पहिलेको भन्दा धेरै मानवीय क्षति पुर्‍यायो । पहिलो लहरमा व्यापक लकडाउन गर्नु, दोस्रो लहर आउनुअघि स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य नागरिकलाई खोप लगाउँदै जानुजस्ता प्रतिकारात्मक उपाय हामीले अपनाएकै हौं । तर, सरकारले छिमेकी चीनबाट शिक्षा लिँदै अक्सिजनसहितका शय्या भएका कोभिड विशेष उपचार केन्द्र एवं अस्पतालहरू पहिलो लहरपछि स्थापना गरिदिएको भए दोस्रो लहरमा हजारौंको ज्यान जाँदैनथ्यो, अक्सिजनजस्तो आधारभूत आवश्यकताका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले लाखौं खर्च गर्नुपर्दैनथ्यो । यो त्यस बेलाको सरकारको कमजोरी नै हो । यसका पछाडि स्वार्थपूर्ण दबाबहरू रहेको आशंका स्वाभाविक छ । विदेशबाट समेत सहज रूपमा भित्र्याउन सकिने सहयोग सामग्री नियतवश ल्याइएन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
दोस्रो लहरका बेला एक अग्रज शल्यचिकित्सकको कोभिडकै कारण मृत्यु भएको थियो । उहाँबाहेक पनि, मैले चिनेका धेरै स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको थियो । अवस्था कस्तो थियो भने, म संक्रमित हुँदा पनि कोभिडका बिरामीको परीक्षण एवं उपचारमा खटिनुपरेको थियो । यस्तो अनुभव अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि होला । त्यस बेला कोरोनाको लक्षण देखा पर्दापर्दै ज्यान जोखिममा पारेर बाक्लो पीपीईमा गुम्सिएर, शौचसमेत च्यापेर घण्टौं बिरामीको स्याहार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । दुर्भाग्य, महामारी फैलिएको अवधिमा कोरोना एवं कोरोनाइतर दुवै उपचारमा क्रियाशील हुनुपर्ने नेपालकै प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल वीरमा समयमै सरकारले दिने भनेको भत्ता उपलब्ध नगराएका कारण हप्तौं सेवा प्रभावित हुन पुग्यो । भत्ता पाउन स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । योजस्तो नमज्जा के हुन सक्छ ? कोभिड बिरामीको हेरचाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाउनुपर्ने भत्ता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो, अब यस्तो कमजोरी हुनु हुन्न ।
यो वैश्विक महामारी पटकपटक विभिन्न उत्परिवर्तन हुँदै केही महिनाको लहरका रूपमा कहिलेसम्म फैलिइरहने हो, भन्न सकिन्न । यसरी उत्परिवर्तित हुँदै जाँदा भाइरस कमजोर हुने हो कि झन्झन् आक्रामक भई मानव संहारको कारक बन्ने हो, भन्न सक्ने अवस्थामा कोही छैन । त्यसैले यसबाट जोगिन सरकारले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ, साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल पनि उच्च पार्नुपर्छ । अहिले विकसित देशहरूमा कोरोनाविरुद्धको खोपको उत्पादन तीव्र रूपमा भइरहेको छ । कोभिड स्थायी रूपमै विलुप्त नहुँदासम्म खोपबाहेक बचावटको विकल्प छैन । खोप लगाए पनि, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्न भने छोड्नु हुन्न ।
अहिले सबै देशले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित पार्न युद्धस्तरमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि खोप केन्द्रहरू बढाइएका छन् । सँगै खोपको स्तरीयता, रेखदेख तथा परिचालनजस्ता पक्षमा सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ । मास्कको सही प्रयोगले विषाणुयुक्त थुक, थोपा, खकार, र्‍याल शरीरमा प्रवेश हुनबाट रोकिन्छ । तर, हावाको सञ्चार नहुने बन्द कोठा, हल, सवारी साधन आदिमा भाइरसलाई मास्कले पनि पूर्ण रुपमा निषेध गर्न सक्दैन । नाक, मुख र चिउँडो टपक्क छोपिने गरी लगाएको तीन तहको मास्कबाट आंशिक रूपमै भए पनि भाइरसलाई रोक्न सकिन्छ । ज्यानलाई नै संक्रमणको जोखिममा पार्नुको साटो कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा विलुप्त नहुँदासम्म सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दा विचार पुर्‍याउनैपर्छ । कामदारहरूको रोजगारी नगुम्ने गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालन गर्दै विद्यालय, होटल, सार्वजनिक यातायात लगायत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
खोप नलगाएका बालबालिका बढी जोखिममा छन् अहिले । ससाना नानीहरूलाई मास्क लगाउन सम्भव नभएकाले सम्पर्कमा रहेका सबैले खोप र मास्क लगाउनुपर्छ । वृद्धवृद्धा एवं दीर्घरोगीहरूको विशेष निगरानीको जरुरत छ । मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई कोभिड संक्रमण हुन गए निमोनिया र आँखादेखि मस्तिष्कसम्म असर पर्ने विशेष प्रकारको कालो ढुसीजन्य रोग लाग्न सक्छ, जसको मृत्युदर ९० प्रतिशतसम्म छ । त्यसैले मधुमेहका बिरामीहरूको शरीरमा चिनीको मात्रा उपचारबाट नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । अस्पतालहरूले कोभिडको अन्त्य अनिश्चित बनिसकेको अवस्थामा कोरोनाइतरका सबैखाले आकस्मिक, गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको हल गर्ने योजना पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्छ । सबै खाले स्वास्थ्य सेवाहरूको स्तरीयता र उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि कोभिड बहाना बन्नु हुन्न । पहिलो र दोस्रो लहरको अनुभव र कमीकमजारीबाट सिक्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:५०
मधेस आन्दोलन नेपाली समाजमा मधेसीहरूको समान अस्तित्वका लागि गरिएको संघर्ष थियो र ‘मधेस प्रदेश’ त्यही संघर्षको एक विस्तारित रूप हो ।
माघ ६, २०७८ चन्द्रकिशोर
खास गरी पहिचानआधारित प्रदेशको नाम दिने पहिलो प्रदेशका रूपमा यो चिनिने भएको छ । जब एउटा अटल अडानले मूर्तरूप लिन्छ, त्यसले कैयौं दृष्टिकोणका रूखहरू ढाल्छ र धरतीमा कम्पन ल्याउँछ । प्रदेशको पहिचान जनकपुरमा निधो हुँदै गर्दा काठमाडौं विस्मयमा थियो ।
माघ मधेसका लागि विद्रोह र बलिदानको महिना हो । यो सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायण हुने समय हो । राजनीतिमा समय छनोटको दूरगामी महत्त्व हुन्छ । इतिहासले आवश्यकता अनुसारको पात्र जन्माउँछ र आफ्नो दिशा एवं गति स्वयं ठम्याउँछ । लालबाबु राउतका लागि, जो मुख्यमन्त्रीका रूपमा लामो समय टिक्ने रेकर्ड बनाउँदै छन्, राजनीतिमा परिस्थिति अनुसार उपयोग गर्न र हुन चाहने व्यक्तिको कहिल्यै अभाव रहेन । यही सोमबार ऐतिहासिक घोषणा गरिन्छ, त्यसको सम्मानमा भोलिपल्ट मंगलबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइन्छ । र हिजो मधेस विद्रोहको स्मृतिमा बलिदान दिवस मनाइन्छ । सम्भावित सत्ताको एकाधिकारवादी चरित्रसँग जुध्न लालबाबुसँग यही तुरूप बाँकी थियो ।
मधेस प्रदेश पाइयो । हिजोसम्म एउटा समुदायको काल्पनिकीमा मधेसीहरू ‘मर्स्या’, धोती र भैया थिए । मधेसीहरू भारतीय मूलका हुन् भन्ने संकथन फिँजाइएको थियो । गैरमधेसी नेपाली मातृभाषीहरू आफूलाई असली नेपाली ठान्ने, बरु छिमेकी भारत वा भुटानका नेपालीभाषीलाई ‘नेपाली’ मान्ने तर मधेसीहरू नेपाली होइनन् भन्ने मानसिकता थियो । मधेस आन्दोलन नेपाली समाजमा मधेसीहरूको समान अस्तित्वका लागि गरिएको संघर्ष थियो र ‘मधेस प्रदेश’ त्यही संघर्षको एक विस्तारित रूप हो । नेपालभित्र मधेस प्रदेश छ भन्ने स्थापना नेपालभित्रकै अन्य भूगोल र बाहिर स्थापित भएको छ । पटकपटकको आन्दोलनका क्रममा मधेसी अभिलाषा जो मुखरित भएको थियो त्यसमा अग्र थियो— ‘नेपाली नागरिकत्वलाई पुनर्व्याख्या ।’ नेपालको संविधान–२०७२ पश्चात् पनि त्यो अभिलाषा बाँकी थियो जो पूर्ण भयो । सीमावर्ती भारतका बिहार–उत्तरप्रदेशका बासिन्दाजस्तो शारीरिक बनोट, वेशभूषा, खानपान, भाषा भएकाहरूको नेपालभित्र पृथक् पहिचान छ, जुन मधेसी हो । दक्षिणी नेपालका रैथाने बासिन्दा बिहारी वा उत्तरप्रदेशवासी होइनन्, उनीहरू त जनक–सिद्धार्थका वंशज हुन् । तसर्थ यो नामकरणको राजनीतिक अभीष्ट त छँदै छ, सामाजिक सन्देश पनि लुप्त छैन ।
मुलुक संघीय अभ्यासमा लागिसकेको छ । यस्तोमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना पुरानै ढर्रामा अघि बढ्ने हो भने अहिलेको नेपाल र भोलिको नेपालमा के फरक होला ? परिवर्तनका नाममा पञ्चायती विकास क्षेत्र वा अञ्चलकै जस्तो कामकारबाहीले नेपालको रूपान्तरण प्रक्रियालाई अपेक्षित त के, गुणात्मक गतिसमेत प्रदान गर्दैन । प्रादेशिक अभ्यासमा आइसकेपश्चात् पनि सत्तामा वर्चस्व कायम गर्नेहरूको पुरानो तौरतरिका र चलखेल पुनः नयाँ संस्करणका साथ सुरु भएको थियो । अन्य प्रदेशको नामकरणको राजनीतितर्फ चियाऔं, धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । स्थानीय तहको नामकरणको विश्लेषण गर्नुस्, त्यसबाट कस्तो निष्कर्ष निस्किन्छ ? तर पनि परिवर्तनकामी नेपालीजन त्यस्तो यथास्थितिवादी रवैयालाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भए । जनतालाई बडो चलाखीपूर्वक अल्झाउने षड्यन्त्रको कष्टकारी जालो बुनिँदै आयो । प्रत्येक आन्दोलनयता नेपालको वर्चस्वशाली जमातले प्राप्त उपलब्धिलाई कठपुतली बनाउँदै आयो । यसलाई एकातिर प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो उत्थानको अवसरका रूपमा देखे भने जुझारु समुदायहरू बदलावका लागि बढी दबाब दिने हो भने प्राप्त उपलब्धि पनि मासिएला भनेर संयमित रहे । त्यस्तो गर्नु भनेको आखिरमा यथास्थितिवादीको चंगुलमा फस्नु थियो । जे जुन किसिमले प्रादेशिक राजनीति विकसित हुँदै आयो, त्यसले पुष्टि गरेको छ— संघीय नेपाल निर्माणको सपना भासिने खतरा बढेको छ । तर प्रदेश २ ले मधेस प्रदेशको घोषणा गरेर संघीय अभ्यासको राजनीतिलाई आशालाग्दो भविष्यतर्फ डोर्‍याउन सकिन्छ भन्ने देखाएको छ ।
मधेस प्रदेशको अभ्यासले पहिचानमा आधारित प्रदेशको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिएको छ । नेपालमा जातिपिच्छे प्रदेश बनाउन सम्भव छैन तर मधेस प्रदेश राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले समेत सम्भव भयो । यसले देशभित्र मधेसको सुरक्षित र सम्मानित भविष्य छ भनेर प्रस्ट्याउने मौका दिएको छ । यसले अलग हुन चाहनेहरूलाई पनि अलग हुनु नपर्ने अवस्था सृजना गरिदिन्छ । मधेस आन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको संघीयताको संकल्पलाई व्यवहारतः सार्थक तुल्याउन यसको प्रयोगका सामु देखिएका चुनौतीहरूको समाधान आधारभूत सर्त हो । संघीयताको परिपक्वता कुनै स्थिर विन्दु नभएर एउटा साधना हो जो दायित्वपूर्ण जनभागीदारी तथा विवेकयुक्त राजनीतिक संस्कृतिमा निर्भर हुन्छ । निश्चय नै, संघीय अभ्यास अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले लोकजीवनबाट निःसृत हुन्छ । संघीयता जनजीवनको निरन्तरतामा एकात्म भएकाले जीवन्त हुन्छ र यसको पुष्टि यसले आफ्ना अभ्यासहरूमार्फत गर्छ । समाजको शक्तिको विनियोग धेरैजसो नेतृत्वमाथि नै निर्भर हुन्छ । मधेस प्रदेशले कैयौं उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर बहुसंख्यक समाजको अपेक्षा समानता, समता र सौहार्दका साथ अगाडि बढ्नुमा छ । सामाजिक–राजनीतिक तनावलाई थेग्नु पनि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । तर त्योभन्दा अहम् हो— आन्तरिक औपनिवेशिक मनोवृत्ति र त्यसबाट भरथेग पाएको सामाजिक–राजनीतिक तन्त्रहरूबाट कसरी मुक्त हुने ?
यतिखेर सोधिँदै छ— मधेस प्रदेशबाहेकका बासिन्दाले आफूलाई मधेसी भनेर चिनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? तराईका अन्य हिस्सामा ‘मधेस’ भनिने दाबी रहन्छ कि रहँदैन ? मधेससँग गाँसिएर आउने विम्ब वा प्रतीकहरूले यसै पनि उदात्त परिकल्पना जगाउँछन् । तिनको उपादेयता नै त्यही भावनाका लागि हो । तराईका रैथानेहरू मात्र होइन, नेपालको जुनसुकै भूगोलमा बसाइँसराइ गर्न पुगेकाहरूले आफूलाई मधेसी पहिचानभित्र चिनाउन चाहे त्यो स्वतन्त्रता व्यक्तिविशेषमा निहित रहन्छ । सशक्त मधेसलाई वास्तविक अर्थमा कार्यमूलक र सहज बनाउन अझै कोसौं यात्रा गर्नुपर्नेछ । सुनको जतिसुकै सूक्ष्म टुक्रा पनि सुन नै कहलिन्छ । आफूभन्दा पूर्व र पश्चिमका भूभाग जोड्ने मधेस प्रदेशले एउटा राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुक्रे प्रदेशको अस्तित्व पायो । कालान्तरमा यो प्रादेशिक सिमाना हेरफेर हुन पनि सक्छ । मधेसलाई खण्डित किन बनाइयो ? किनभने नेपालको वर्तमान राजनीतिक भूगोलको प्राप्तिपश्चात् वर्चस्वशाली जमातले यति साह्रो आन्तरिक हस्तक्षेप कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । त्यसैले उनीहरूले मधेसी पहिचानका ती सबै तन्तुमाथि हथौडा हानिरहे जसले त्यसलाई ऐक्यबद्ध र सशक्त बनाउँथे । अविच्छिन्न नेपाल राष्ट्रभित्र स्वायत्त प्रादेशिक सरकारको मान्यता मधेसीहरूको राजनीतिक लक्ष्य हो र हुनुपर्छ ।
मधेस नेपाली राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा एउटा बृहत्तर पहिचान हो । यसभित्र मिथिला पनि अटाउँछ र अवध पनि । मधेसभित्र सुदीर्घ र सम्पन्न पहिचान बोकेको मिथिला जनमनमा व्याप्त छँदै छ । निकै अघि सुगौली सन्धिबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साँध पाउँदा वारि र पारिको लोकमानसमा मिथिला बाँचेकै छ । हो, कुनै पनि भू–क्षेत्रमा त्यहाँको भाषिक राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मधेस प्रदेशमा एकै प्रकृतिका सौदाबाजी गर्ने समूहहरू छैनन् । मधेस नामले मिथिला, भोजपुरा वा सलहेसजस्ता भाषिक वा मधेसी दलित पहिचानलाई छेकबार लगाउँदैन । यी सबै फक्रिन चाहने गौरवशाली पहिचानलाई उचित परिवेश दिएर मधेस प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्य बढाउन सक्छ । आखिर राज्यमा हिस्सेदारी खोज्दा त्यहाँ ‘मधेसी’ भित्र विभिन्न भाषिक र सांस्कृतिक समूहले दाबी गर्दै आएको उदाहरणबाट समेत मधेस पहिचानबाट ‘मिथिला’ अभिलाषीहरू नतर्सिनुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी भारतीय प्रदेश बिहारमै मिथिला–मगध , वैशाली–चम्पारणजस्ता प्राचीन एवं मध्यकालीन पहिचानहरू संरक्षित छन् । आफ्नो अवधारणा मात्र सत्य र अन्तिम हो भनेर मात्र अडिइराख्ने हो भने संघीयताविरोधी तत्त्वहरूले त्यसैलाई आधार बनाएर जनमानसलाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।
मधेस प्रदेश घोषणा हुँदैमा मधेस आन्दोलनका सबै कार्यभार पूरा हुँदैनन् । यस प्रदेशभित्र बसोबास गरिरहेका गैरमधेसी पहिचानका नागरिकहरूले समेत आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । स्थापित र उदीयमान नगर–सहरहरूबीच सामञ्जस्यको खोजी गर्ने काममा प्रदेश सरकार चुकेकै हो । प्रदेशको अगुवाले मधेस आन्दोलनको कार्यदिशाबाट बाटो बिराउने, चूक गर्ने काममा पूर्णविराम लागेको छैन । प्रदेश निर्माण र सशक्तीकरणको अभियान एउटा व्यक्तिले मात्र चाहेर हुँदैन । सामूहिक दायित्व र प्रयासको आवश्यकता पर्छ त्यसलाई, तर सामूहिक दायित्वलाई निर्दिष्ट गन्तव्य दिने काम भने मुख्यमन्त्रीकै हो । नामकरणको सवालमा नेपाली कांग्रेस फेरि चुकेको छ, उसको नेतृत्वले भुइँस्पन्दनलाई बुझ्न नसकेको पक्कै हो । यस्तै राजनीतिक कार्यक्रम बनाउने हो भने कांग्रेसलाई मधेस प्रदेशमा उँभो लाग्न कठिन हुन सक्छ । वीरगन्जको पिपराका एक प्रौढ घुरछेउ रेडियो सुन्दै गर्दा भन्दै थिए—भैया मिलल मधेस प्रदेशबाकिर रह गेल मुद्दा अवशेष !
प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:४९